३० तला माथिबाट सडकमा बोतल फाल्ने १४ जना कारबाहीमा ! - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > क्यानडा विशेष > ३० तला माथिबाट सडकमा बोतल फाल्ने १४ जना कारबाहीमा !
February 21, 2021 February 21, 2021 News Desk55
एम बस्नेत, क्यानाडा। २१ फेब्रुअरी २०२१। गएराती टोरन्टो शहरको एउटा हाईराईज कण्डोमेनियमको ३० तला माथिको बालकनिबाट तल सडकमा बोतलहरु फालेको घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा टोरोन्टो प्रहरीले चौध व्यक्तिमाथी अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ।
आईतवार बिहान करीब २:३० बजे त्यसरी बालकनिबाट सडक पेटीमा बोतल फालेको उजुरी आएलगत्तै प्रहरी घटनास्थल पुगेको थियो। लगत्तै घटनास्थल पुगेको प्रहरीले समेत माथिबाट तल सडकमा बोतल फालेको देखेपछि प्रहरी हर्कतमा आएको थियो। त्यसरी अपार्टमेन्ट भवनको बालकनीबाट बोतलहरू फ्याँकिदा तल सडकमा हिड्ने यात्रीहरूका लागि ठूलो खतरा रहेकोले उनीहरुको सुरक्षार्थ तत्कालै योर्क स्ट्रीट र लेकशोर बोलिभर्डको बाटो बन्द गरेको थियो।
बोतल फालेको बालकोनी रहेको अपार्टमेन्टमा प्रहरीले सोधखोज गर्दा १४ जना मानिसहरु जमघट भएको भेट्टाएको थियो। प्रहरीले ती व्यक्तिहरुलाई फालिएको बोतलका साथै लकडाउन उल्लंघनको अभियोगमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ। टोरोन्टो हाल स्टे-एट-होम अर्डर अन्तर्गत छ। उक्त नियम अनुसार मानिसहरूलाई आफ्नै घर भित्रै बस्नु पर्ने र अन्य बाहिरिया मानिसहरूसंग जमघट गर्न प्रतिबन्ध छ।
प्रहरीले घटनामा भने कोहि पनि घाइते नभएको बताएको छ।
बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्धितियाले राजकुमार ह्यारी र मेघन लाई राजकीय जिम्मेवारीबाट अलग ।
तपाईलाई क्यानडामा नेपाली बोल्ने कानुन व्यवसायी वा पारालिगलसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने छ ?सम्पर्क गर्नुहोस् ।